Garsoor - Garsoor.net - Garsoor is the most trusted online media in Somalia
Author Archives: Garsoor
DEG DEG: Wasiirkii wasaarada diinta iyo awqaafta oo xilka laga qaaday
Raysul wasaare Xasan cali Khayre ayaa goor dhaw xilkii wasiirnimo ka qaaday wasiirkii diinta iyo awqaafta ee xukuumada Soomaaliya mudane Xasan Macalin Xuseen. Digreeto ka soo baxday xafiiska raysul wasaaraha oo uu akhriyay wasiirka warfaafinta ayaa xilkan si Ku meel gaar ah loogu dhiibay wasiiru dowlihi wasaaradasi mudane Cabdixakiim Xasan Ashkir. Wasiir Xasan Macalin...
Qarax gaari ayaa goor dhaw ka dhacay isgoyska Siinaay ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa la sheegaya in uu ka dhashay gaari nooca raaxada ah oo lagu xiray waxyaabaha qarxa. Ugu yaraan hal ruux ayaa La soo warinaya inuu Ku dhaawacmay qaraxa. Halkan kala soco faahfaahinta. ...
DEG DEG: Ku dhawaad 80 Soomaali ah oo laga soo tarxiilay Mareykanka ayaa soo gaaray Muqdisho
Ku dhawaad 80 qof oo Soomaali ah oo laga soo tarxiilay dalka Mareykanka ayaa goor dhaw soo gaaray caasimada Muqdisho. Diyaarada siday dadkan ayaa good dhaw soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde. Xukuumada Waashington ayaa dadkan Ku heysay xabsiyo Ku yaalla dalka Mareykanka. Dhowr jeer ayaa Muqdisho la keennay Soomaali badan oo laga soo musaafuriyay dalkasi. ...